६० वर्षको उमेरमा पनि भुवन केसी र जियाको यस्तो अनौठो प्रेम कहानी – List Khabar
Home / जीवनशैली / ६० वर्षको उमेरमा पनि भुवन केसी र जियाको यस्तो अनौठो प्रेम कहानी
६० वर्षको उमेरमा पनि भुवन केसी र जियाको यस्तो अनौठो प्रेम कहानी
admin July 3, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 67 Views
निधारबाटै थाहा हुन्छ तपाई बुद्धिमान की जिद्दि ?
उमेरले ६० वर्ष पुग्न लागिसकेका भुवन केसी अझै पनि उत्तिकै आकर्षक देखिन्छन् । कहिल्यै जिम र व्यायाम नगर्ने भुवन उत्तिकै ह्यान्डसम पनि छन् । केसी चलचित्रका सर्वा्धिक सफल कलाकारसमेत हुन् । उनी अभिनयमा पनि सफल छन् । उनले निर्माण गरेका अधिकांश चलचित्र सुपर हिट भएका छन् । यद्यपि भुवन पारिवारिक हिसाबले भने असफल मानिन्छन् ।
भुवन र जीयाको यो लुकिछिपी प्रेमले कहिले औपचारिकता पाउला त ? जीयाले भुवनसँग बिहे गर्ने चाहना सार्वजनिकरुपमै राखे पनि भुवनले भने अहिलेसम्म हरियो बत्ति बालिसकेका छैनन् । यसबारे उनले सार्वजनिकरुपमा केही टिप्पणी गरेका पनि छैनन्
Previous नासोँमा बाढीपहिरोबाट जलविद्युत् आयोजना र सडक भत्किँदा एक अर्बभन्दा बढीको क्षति
Next भगवान् जस्ता श्रिमान बिनोदले `सधै माया गर्नेछु तिम्रो काखमा म र्नेछु´ भनेपछि यसरी खुसि भइन अनिता (हेर्नुस् भिडियो )
काठमाडौँ :- मानिसहरुको दाँत फट्टीएको पक्कै देख्नु भएको छ होला। यस्ता मानिसहरु हेर्दा तपाईलाई अजीब …